Nin ku weeraray bastoolad hogaamiyaha Turkiyiinta ee Bulgaria xilli uu ka hadlay taleefishinka – idalenews.com
Nin ku weeraray bastoolad hogaamiyaha Turkiyiinta ee Bulgaria xilli uu ka hadlay taleefishinka
Nin ayaa madaxa kaga qabtay bistoolad hogaamiyaha xisbiga dadka Turkiyiinta ah ee dalka Bulgaria iyadoo laga daawanayay taleefishinka.
Ahmed Dogan oo ah hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa xaqa iyo xoriyada (MRF) ayaan wax dhaawac ah soo gaarin ninkii bastoolada watayna waxaa dhulka ku dhuftay ilaaladiisa.
Falkan ayaa dhacay maanta kulan uu lahaa xisbiga kana dhacayay magaalada Sofia. Wasiirka arrimaha gudaha Tsvetan Tsvetanov ayaa sheegay in ninka soo weeraray hogaamiyaha Turkiyiinta uu isku dayay in uu labo xabadood ku rido balse xabadihii ayaa u dhici waayay oo ka katibay.
Wasiirka ayaa intaa raaciyay in ninka isku daygan geystey uu ahaa nin hore loogu yiqiin dambiyada isla markaana dhac iyo mooryaanimo hore u geystey. Booliska ayaa xiray ninka wax weeraray oo ahaa 25jir ka yimid magaalada ku taal badda madow ee Burgas waxana uu sidoo kale watay labo mindi.
Xisbiga MRF ayaa waxa u wakiil ka yahay dadka Turkiga ah iyo Muslimiinta kale ee ku nool dalka Bulgaria kuwaas oo ah 12% tirada dadka dalkaas ee toddobada millionka ah. Mr Dogan oo 58 jir ah ayaa hogaaminayay xisbigan muddo 25 sano ah. Waxana uu dib ugu soo laabtay shirkii kadib markii uu dhacay weerarka lagu soo qaaday.
Madaxweynaha Bulgaria Rosen Plevneliev ayaa hadal uu ka soo saaray dhacdadan waxa uu ku sheegay in uu ka xun yahay isla markaana ay ahayd mid aan dimuqraadiyad ahayn oo aan la aqbali karin. Weerarada lagu qaado siyaasiyiinta ayaan hore uga dhici jirin wadanka Bulgaria hase ahaatee sanadkii 1966dii ayaa R/wasaarihii xilligaas Andrei Lukanov waxaa laga helay meydkiisa meel ku dhow guriga uu ka degenaa magaalada Sofia iyadoo la toogtay.